Jürgen Klopp oo ku dhawaaqay war ay si weyn u sugayeen taageerayaasha Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 26 Luulyo 2021. Tababaraha reer Germany iyo kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp, ayaa ku dhawaaqay warka ay sugayeen taageerayaasha Reds, kaasoo ku saabsan daafaca dhexe ee Virgil van Dijk.
Jürgen Klopp ayaa sheegay in daafaca halyeeyga ah ee reer Holland uu soo laaban karo, si uu markii ugu horreysay kaga qeyb galo kulan ay ciyaareyso Liverpool muddo dheer kaddib, kulanka ay wajahayaan kooxda Hertha Berlin.
Liverpool ayaa la kulantay dhibaatooyin badan oo dhanka daafaca ah, kaddib maqnaanshiyaha Virgil van Dijk oo dhaawac jilibka ah ka soo gaaray kulankii Everton ee bishii October ee sanadkii hore.
Kulanka Hertha Berlin ee Khamiista soo socota ayaa laga yaabaa inuu soo laabto Virgil van Dijk, si uu markale ugu ciyaaro kooxda Liverpool, markii ugu horeysay tan iyo kulankii Everton qiyaastii toban bilood ka hor.
Tababare Jürgen Klopp oo ka soo muuqday shir jaraa’id ayaa wuxuu ka hadlay Virgil van Dijk, wuxuuna yiri:
“Waxaan rajeynayaa in Van Dijk uu ka qeyb qaadan doono daqiiqado yar, waan rajeynayaa laakiin ma hubo taas.”
“Wuxuu u muuqdaa mid aad ugu wanaagsan tababarka, waxaa laga yaabaa inaan qeyb kaga dhigno daqiiqado yar.”
“Marka hore waxaan u baahanahay inaan xoogaa wadahadal la yeesho dhakhaatiirta iyo ciyaaryahanka kahor go’aanka, laakiin wuxuu u muuqdaa inuu diyaar u yahay inuu ka qeyb galo, waan arki doonaa waxa dhaca.”